एम.बि. बि. एस. को लागि कसरी पढ्ने त ? | माधव भुसाल | PART ONE | - Nepthage - Amateur Nepali Writers' Blog
१ नं मा पर्ने विद्यार्थिहरुको लागिः
१ नं का विद्यार्थि अर्थात, Basics strong भएका अनि छात्रवृत्तिमै नाम निकालेर पढ्न चहाने विद्यार्थिहरु।
तपाईँहरु ईन्सटिच्युट जाँदा र नजाँदा त्यस्तो तात्विक अन्तर हुँदैन, ईन्सटिच्युट जाने र नजाने आँफै निर्धारण गर्नुहोस्।
याद गर्नुहोस्, तपाईँहरुको लडाई सम्पुर्ण दसौँ हजार विद्यार्थिहरु सँग हो, त्यसैले सहज रुपमा नलिनुस्। तपाईँको Basics strong त होला, तर नाम निकाल्न १०० rank को वरिपरि नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पढाई अलिकति पनि तलमाथि हुँदा rank जता पनि पुग्न सक्छ।
यदी ईन्सटिच्युट जानु हुन्छ भने ईन्स्टिच्युटको पढाई सकिसकेपछि घरमा गएर दिनको १-१ घण्टा PCBZ पढ्नुहोस् जसमा त्यही दिनको ईन्सटिच्युटमा पढाई भएको टपिक नै पढ्नुहोस्। पुराना छुटेको पढाई पछि कभर गर्दै जान सकिन्छ, तर अहिले नै पढाई भइराखेको कोर्स बाट सुरु गर्नुस्। त्यसो गर्दा पढाई सकिँदै पनि जान्छ र पढ्न सहज पनि हुन्छ। क्लास मिस नगर्नुस् भनेर तपाईँहरुलाई सिकाई राख्न आवश्यक छैन।
यदि ईन्सटिच्युट जानु हुँदैन भने तपाईँहरुले PCBZ सबैलाई छुट्टा-छुट्टै २-२ घण्टा दिनै पर्छ। पढाई सुरुबाटै गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईँ जोड-तोडले पढ्नुपर्ने हुन्छ किनकी तपाईँकै लेभलका कोही विद्यार्थिहरुले सरसँग पनि सिकिरहेका छन्। त्यसैले जति पढ्नुहुन्छ, त्यो concentrated भएर पढ्नुस्।
अनि २ घण्टा पुराना प्रश्नहरु केलाउन समय दिनुहोस्। त्यसलाई BPKIHS/IOM/KU का प्रश्नहरु alternately पढ्नुहोस्। कुनै एउटा सेट एक दिनमा सक्नुसहोस्; एकै दिनमा धेरै सेट नगर्नुहोस्। समय दिएर एउटा सेट आनन्दले गर्होस्; ३ घण्टा लागे पनि मजा लिएर पढ्नुस्।
यति गर्दा १०-१२ घण्टाको पढाई हुन्छ र यो भन्दा धेरै पढेर केही हुनेवाला छैन, दिमागले लिनेवाला पनि छैन। त्यसैले कसैको हल्लाको पछि लागेर १६-१८ घण्टा वाला गफको पछाडी नलाग्नुस्। जति पढ्नुहुन्छ बुझेर पढ्नुस्। शरीरलाई रेस्ट पनि दिनुस्।
तर पुराना प्रश्नहरुको उत्तर जान्नु मात्रैले हुँदैन, त्यसको orientation बुझ्न सक्नुपर्छ। किनकी अचेल सोधिने प्रश्नहरु सकेसम्म medically oriented आउन थालेको मेरो ठम्याई छ र यो पटक सोधिएको प्रश्न अर्को वर्ष सोधिने प्रश्नसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
Embryologists can presume the future organs
of the embryo in:
यि त उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् जुन तपाईँहरु छुट्याउन सक्नुहुन्छ। हुन त पढ्नै पर्ने त हो नि भनेजस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यि प्रश्नहरु medically oriented हुँदै गएको मैले अनुभव गरेको छु। त्यसैले medically important key points हरु केलाउँदै जानुस्। यो पटक medically important धेरै प्रश्नहरु सोधिएको थियो; ‌‍+2 पढेको विद्यार्थिले त्यसलाई सामान्य प्रश्न पनि लिन सक्छ।
अनि अघिल्ला-अघिल्ला वर्षहरुमा सोधिएको प्रश्नहरुको चार ओटै options हरुको बारेमा पनि पढ्नुहोस्, तपाईँको syllabus मा नहुन पनि सक्छ। तर, तिनिहरुबाट प्रश्न सोधिएको मैले अनुभव गरेको छु र ति प्रश्नलाई नयाँ प्रश्न भनिन्छ।
जस्तै electrophoresis सँग सम्बन्धित प्रश्न, प्रश्न मलाई ठ्याक्कै याद भएन। तर, एउटा वर्ष electrophoresis options मा थियो तर सही उत्तर थिएन। तर, अर्को वर्ष अर्को उस्तै प्रश्न सोधियो जसको उत्तर electrophoresis थियो। यसरी प्रश्नहरुको पनि continuity feel गर्न सकिन्छ। त्यसैले पुराना प्रश्नहरु सुक्ष्म अध्ययन गर्नुहोस्।
बुक कुन पढ्ने तपाईँहरुलाई सिकाइराख्न पर्दैन। मैले त NAME को Modules नै पढ्नुस्, जुन काफि छ भन्छु। अरु ईन्सटिच्युटको बुक हेरेको छैन र ग्यारेन्टि पनि लिन सकिँदैन। NAME को Modules लाई तीन पटकसम्म रिभााइज गर्नुस्, परिक्षा आउन टन्नै समय छ र माथिको सेड्युलमा सकिन्छ पनि।
अन्तमा शनिबारको परिक्षा नबिराई दिनुहोस् तर बाहाना बनाएर छाड्दै जानुभयो भने तपाईँको पढाई खस्केको पत्तो पाउनुहुन्न। हरेक पटक टप २०० मा पर्न सक्नै पर्छ भन्ने बुझिराख्नुस्। आफ्नो मार्क्स त बढाउनु छँदै छ र rank maintain गर्न पनि आवश्यक छ। परिक्षामा बिग्रेको प्रश्नहरु मात्रै नपढ्नुस्, त्योसँग सम्बन्धित सबै कुराहरु नियाल्नुस् र एउटा फरक कपिमा नोट गर्दै जानुस् र हरेक हप्ताको शनिबार-शनिबार त्यसलाई रिभाइज गर्दै जानुस्। यसो गर्दा ईन्ट्रान्स आइपुग्दासम्म तपाईँले ति कुराहरु सयौँपटक पढिसक्नु हुन्छ।
बाँकी किसिमका विद्यार्थिहरुको लागि आँउदो भागमा।